Nhau -Kusimudza masimbi - kwete chete kukuita kuti utaridzike zvirinani, zvakare nzira huru yekudzidzisa
Kusimudza masimbi - kwete kungoita kuti utaridzike zvirinani, zvakare nzira huru yekudzidzisa
Usanetseke.Usatya kana kusemburwa nezwi rokuti kusimudza uremu.Ndine folda pakombiyuta yangu inonzi The Beauty of Weightlifting.Chokwadi, kusimudza uremu kwakanaka, zvese zvekufamba kwayo uye chimiro chemutambi.
Heano mimwe yemiviri yevanosimudza uremu kuti utarise:
Iwe unotoziva kana zvichitaridzika zvakanaka, saka nei ndichiti ndiyo yakanyanya kunaka nzira yekudzidzisa?
Isu tinowanzo kudzidzira squat, kudhonza zvakaoma, bhenji kudzvanya, kukwasva, kusimudza simba, kudhonza-kumusoro (kuvaka yako yekudzidzira kufamba sisitimu (kusimudza simbi)), kusimudza simbi, asi nekuda kwekufamba uku, barbell uye mudzidzisi anogara akazara. kuonana, hapana kusunungurwa (huremu hunorema haubhururu), kudzidziswa kwesimba rinoputika hakuna kukwana.
Chii chimwe chinogona kudzidziswa mafambiro ane uremu kunze kwehunyanzvi uye simba?
Mitsipa, kukurumidza kuunganidza kwemhasuru huru.Zviripachena kuti iyi ibetsero yekukurumidza pakusvetuka, asi haisi yekusimudza simbi here?
Sensitivity inokupa iwe zviri nani pfungwa yekutarisira uye inobvumidza iwe kudzora muviri wako zvirinani.Mitambo yebhora hazvidi kutaura, havazive kuti chii chakaitwa nechitarisiko, sezviri pachena chinofanira kusimbisa pfungwa yeproprioception.Ipa simbi?Iwe haufanirwe kusvika kumusoro, iwe unongotanga kudzidzira, uye iwe unoda kusvika pakuziva mafambiro ako zvirinani, handiti?Munhu wese anoda kudzora muviri wake zviri nani.